अत्यतै घिनलाग्दो यो कार्यक्रम, नेपाली समाजमा के हुँदै छ यस्तो ? – List Khabar
Home / समाचार / ﻿ अत्यतै घिनलाग्दो यो कार्यक्रम, नेपाली समाजमा के हुँदै छ यस्तो ?
﻿ अत्यतै घिनलाग्दो यो कार्यक्रम, नेपाली समाजमा के हुँदै छ यस्तो ?
admin December 25, 2021 समाचार Leaveacomment 92 Views
हेमन्त केसी, जाजरकोट : राजनीतिमा संख्या बढी देखाउनका लागि जाजरकोटका गाउँगाउँमा पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग बढिरहेको छ । ठूला दलको अधिवेशन चलिरहेको समयमा सबैभन्दा बढी बालबालिका नै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
दलनिकट विद्यार्थी संगठनले आफ्ना माउ पार्टीको नेता सहभागी हुने कार्यक्रममा पनि बालबालिका तथा विद्यार्थीलाई समेत विद्यालयमा जम्मा गरेर विद्यार्थी संगठन विस्तार गर्ने र दल त्याग गर्न लगाई प्रवेश गराएको अभिभावकहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
बालबालिकालाई शिक्षा र राम्रो संस्कार दिने उमेरमा राजनीतिमा लगाएर भविष्य ब’र्बाद गर्न खोजेको बारेकोट गाउँपालिका– ४ का सुरेन्द्र सिंहले बताए ।
‘पढ्ने, लेख्ने उमेरमा राजनीतिक कुरामा बालबालिकालाई प्रयोग गरेर खण्डित गरी भविष्य ब’र्बाद गराउने काम हुनु गलत छ । यसको जती विरोध गरे पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘बालबालिका भनेका काँचो माटो हुन् । उनीहरूलाई जुन संस्कार दियो, सोहीअनुसारको चेतनामा वृद्धि हुन्छ
Previous पठाओले ल्यायो नयाँ सुविधा, के छ प्रावधान ?
Next भोलि देशभर सार्वजनिक विदा !